कोरोना संक्रमणका कारण कनेक्टिकटमा एक नेपालीको निधन बाल्टिमोर,अमेरिका,मे २१। कोरोना संक्रमणका कारण कनेक्टिकटमा एक नेपालीको निधन भएको छ। पुर्ख्यौली थलो तनहुँ भएका र हाल पोखरामा बसाई सरेका राज सेन ठकुरीको बुधवार निधन भएको हो। कनेक्टिकटमा कोरोना संक्रमणका कारण निधन हुने ठकुरी पहिलो नेपाली हुन्। ५६ वर्षीय ठकुरी विगत डेढ महिनादेखि अस्पतालमा उपचाररत थिए। कनेक्टिकटमा एक्लै बस्दै आएका...
लाखौँ ऋण गरेर अमेरिका आए,अल्पायुमै ज्यान गुमाए बाल्टिमोर,अमेरिका,मे २१। गत आइतवार निधन भएका नेपाली युवा आशिष केसीको दाहसंस्कार गरिएको छ। बुधवार अपरान्ह केसीको दाहसंस्कार गरिएको मेरिल्याण्ड राज्य संसदका सदस्य डेलिगेट ह्यारी भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। २५ वर्षीय केसी गत शुक्रवार एक तालमा डुबेका थिए। हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी अस्पताल पुर्याइएका उनलाई बचाउन चिकित्सकहरुले गरेको...
बाल्टिमोरमा अर्का नेपाली युवाको निधन बाल्टिमोर,अमेरिका,मे १८। बाल्टिमोर नजिक ग्लेन बर्नी भन्ने ठाउँमा बस्दै आएका नेपाली युवा आशिष केसीको निधन भएको छ। २५ वर्षीय केसीको आइतवार वाल्टिमोर वाशिङ्गटन मेडिकल सेन्टरमा निधन भएको हो। बाग्लुङ्ग जिल्ला पुर्ख्यौली थलो भएका केसी गत शुक्रवार ग्लेन बर्नी नजिकैको एक तालमा डुबेका थिए। आफ्नो भतिज र साथीहरुसंग तालमा पुगेका केसी पौडी खेल्दै...
बाल्टिमोरमा एक नेपालीको निधन बाल्टिमोर,अमेरिका,मे १६ । मेरिल्याण्डको क्रफ्टन भन्ने ठाउँमा बस्दै आएका नेपाली युवा बैकुण्ठ लामिछानेको अल्पायुमै निधन भएको छ । ४८ वर्षीय लामिछानेको बुधावार राती करीब १० बजेतिर बाल्टिमोर वासिंगटन मेडिकल सेन्टरमा उपचाररत रहेकै अवस्थामा निधन भएको उनका पारिवारिक नातेदार गजेन्द्र अर्यालले ग्लोब नेपाल डटकमलाई जानकारी दिनु भएको छ ।...
मेरिल्याण्डका सबै सार्वजनिक विद्यालय शैक्षिक वर्षभरका लागि बन्द बाल्टिमोर,अमेरिका,मे ७ । मेरिल्याण्ड राज्यका सरकारी बिद्यालय यो वर्षको शैक्षिक सत्रको बाँकी अवधिका लागि बन्द भएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण बन्द रहेको विद्यालयको शैक्षिक सत्रको बाँकी अवधि पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको राज्यकी स्कूल सुपरिटेन्डेन्ट करेन सल्मोनले जनाएकी छिन् । उनका अनुसार,कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न संकटमा...
मेरिल्याण्डमा कोरोनाको असर कम हुँदै,जनजीवन सामान्य बनाउँदै लैजाने सरकारको तयारी बाल्टिमोर,अमेरिका,मे ७ । मेरिल्याण्ड राज्यमा कोरोना संक्रमणको प्रभाव क्रमश: न्यून हुँदै गएको छ । पछिल्लो एक साता संक्रमणको असर स्थीर र पहिलेको साताभन्दा कम हुँदै गएको पाइएको छ ।विगत केही सातादेखिको संक्रमणको तुलनामा पछिल्लो साता संक्रमणको आँकडा कम हुँदै गएपछि राज्य सरकारले पनि विस्तारै जनजीवन सामान्य बनाउदै लैजाने तयारी सुरु गरेको छ ।...
बेरोजगारी बीमाका लागि आवेदन कसरी दिने ? बाल्टिमोर,अमेरिका,अप्रिल २२ । कोरोना संक्रमणका कारण अहिले विश्वभरका जनता प्रभावित छ । अर्थतन्त्र तहसनहस छ र जनताको दैनिक जीवनयापन समेत कठीन हुन पुगेको छ । विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिका अहिले यही संक्रमणसंग जुधिरहेको छ । जसलाई जित्न अमेरिकाले हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरेको छ भने मुलुकभर आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरेर कोरोनाबाट सुरक्षित...
मेरिल्याण्डमा मास्क अनिवार्य बाल्टिमोर,अमेरिका,अप्रिल १८ । मेरिल्याण्ड राज्यमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । गभर्नर लारी होगनले बुधवार कार्यकारी आदेश जारी गर्दै कोरोनाको संक्रमण थप भयावह हुन नदिन आम नागरिकले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने आदेश जारी गरेका हुन् । शनिवार बिहान ७ बजेदेखि यो आदेश कार्यान्वयनमा आउनेछ । ग्रोसरी स्टोर,फार्मेसी,खुद्रा किराना पसल,लिकर...
अमेरिकामा सरकारले बाँड्न थाल्यो पैसा एजेन्सी,अप्रिल ११ । कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकाको जनजीवन र अर्थतन्त्र दुवै तहसनहस भएको छ । राष्ट्रिय संकटकाल र राज्य तहमा लकडाउनका कारण अहिले अमेरिकाको आधाभन्दा बढी जनसंख्या घरमै बसिरहेको छ । व्यापार व्यवसाय बन्द छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले आम अमेरिकी करदाताहरुलाई प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार शनिवारदेखि...
अमेरिकामा कोरोना: के मर्ने जति सबै संक्रमित थिए त ? एजेन्सी,अप्रिल ११। विश्वभर फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसका कारण अहिले सम्पूर्ण मानवजाति त्रास र संकटको अवस्थामा छ । पछिल्लो समय यो संक्रमणको सबैभन्दा बढी असर अमेरिकामा देखिएको छ । अमेरिकाको दैनिक जनजीवन पछिल्लो एक महिना यता अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । अर्थतन्त्र चौपट छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या नजरबन्द जस्तो अवस्थामा छ । विश्वको एक मात्र...
मेरिल्याण्ड र भर्जिनियामा घरभित्रै बस्न आदेश बाल्टिमोर,अमेरिका,मार्च ३० । कोरोना भाईरसको संक्रमण अझ बढी फैलिएको भन्दै मेरिल्याण्ड र भर्जिनियाका गभर्नरले राज्यमा थप कडाई गर्ने घोषणा गरेका छन् । मेरिल्याण्ड राज्यका गभर्नर लारी होगनले आज सोमवार राती ८ बजेदेखि घरभित्रै बस्न (स्टे एट होम) आदेश जारी गरेका छन् । यसैगरी भर्जिनिया राज्यका गभर्नर राल्फ नर्थमले पनि आज यस्तै कार्यकारी आदेश...
कोरोना संक्रमित मोक्तान खतरा मुक्त न्यूयोर्क,अमेरिका,मार्च २९ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित न्यूयोर्कमा बसोवास गर्दै आइरहेका शम्भु मोक्तानले आफु उक्त भाइरसको खतराबाट मुक्त भएको जनाएका छन् । शनिवार राती उनले अस्पतालको कक्षबाट आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्,-' म तपाईंहरुको आशिर्वाद र प्रार्थनाले खतराबाट मुक्त भएको छु र चिकित्सकहरुले मलाई भोली बिहान डिस्चार्ज गर्ने भएका छन्...